नेपालका बैंकमा ह्याकरका सफ्टवेयर ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
नेपालका बैंकमा ह्याकरका सफ्टवेयर ?
काठमाडौं । एनआइसी एसिया बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकर समूहले करिब आधा अर्ब रुपैयाँ चोरी गरे । स्वीफ्ट कोड ह्याक गरी गत कात्तिकमा पैसा चोरी भएको थियो । जसमध्ये करिब ५ करोड रुपैयाँ बैंकले अझै फिर्ता पाउन सकेको छैन ।
अनुसन्धानको क्रममा उत्तरकोरियाको ‘लजारुस’ समूहले बैंकको स्वीफ्ट कोड ह्याक गरेको कुरा पत्ता लाग्यो । सो समूहले गत वर्ष बंगलादेशमा पनि स्वीफ्ट कोड ह्याक गरी अरबौं ट्रान्सफर गरेको थियो ।
पछिल्लो समय विश्वमै उत्तर कोरियाली ह्याकरहरुले बिगबिगी बढीरहेको छ । पश्चिमी देशहरुलाई समेत उनीहरुले चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तो बेला केही उत्तर कोरियाली नागरिकहरुले नेपालमा सफ्टवेयर निर्माणसम्बन्धी आइटी कम्पनी खोलेका छन् । जसलाई निकै शंकास्पद रुपमा लिइएको छ ।
योङ बोङ चन्द आईटी कम्पनीको नाममा केही उत्तर कोरियन नागरिकहरु नेपालमा बिजनेश भिसामा बस्दै आएका छन् । माइतीघर नजिकै उनीहरुले कार्यालय स्थापना गरेका छन् । उनीहरुले ‘सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र डाटा प्रोसेसिङ’ का नाममा बिजनेस भिसा लिएका छन् । सो कम्पनीका नाममा ८ जना उत्तर कोरियन नागरिकहरु नेपालमा सक्रिय छन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित उत्तर कोरियाली दुतावासको नजिक भएर उनीहरुले आफ्ना गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । दूतावासले नै सो कम्पनीलाई सहयोग गर्नुले पनि थप शंकास्पद बनाएको छ । दूतावास निकट भएर जासुसीको गतिविधिमा समेत उनीहरु संलग्न रहेको हुनसक्ने अध्यागमन विभागको आशंका छ ।
काठमाडौंका बैंक लगायत केही कम्पनीहरुमा उनीहरुले सफ्टवेयर निर्माण तथा डाटा प्रोसेसिङसम्बन्धि कामको प्रस्ताव लगेका छन् । तर, उनीहरु शंकास्पद समूह भएकाले ह्याकिङको उदेश्यले उनीहरुले आफुहरुको सफ्टवेयर बिक्रि गर्न लागेको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ । उनीहरुले बैैंकहरुमै आफ्नो सफ्टवेयर बेच्ने प्रयास गरिएका छन् ।
आधुनिक प्रविधि अँगाले पनि नेपालमा साइबर सेक्युरिटी क्षेत्रको बारेमा जानकार व्यक्तिहरु थोरै छन् । जसकारण नेपालको बैंकदेखि सरकारी सफ्टवेयरहरु सम्बन्धि बेला बेलामा ह्याक हुने गरेका छन् ।
यही बेला उत्तर कोरियन नागरिकहरु समेत आइटीसम्बन्धि व्यापारमा आबद्ध हुनु संयोग मात्र नभएको बताइन्छ । चन्द थरका एक नेपालीलाई समेत साझेदार बनाएर उनीहरुले यस्तो व्यवसाय गर्न गरेको स्रोत बताउँछ । नेपालमा व्यापारको आवरणमा धेरै जना जासुसी तथा अन्य अवैध गतिविधिमा बस्दै आएका छन् । सरकारले उनीहरुमाथि नियमन गर्न नसक्दा नेपाल विदेशीहरुको खेलमैदान बन्दै गएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस नेपाली सैनिक र प्रहरीबाट यातना पाएका बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन राष्ट्रसंघको निर्देशन
२६,असार.२०७५,मंगलवार २१:०० मा प्रकाशित
← एसएसपी पोखरेलका झगडिया गजुरेल ठगी आरोपमा पक्राउ
बालुवाटारमै रोकियो सरुवाको फाइल →